ukujongana: i-samsung galaxy s8 kunye ne-s8 + zi- $ 150 ezingabizi kakhulu xa kuthengwa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + zi- $ 150 ezingabizi kwi-Best Buy
I-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + ukuthengisa kujongeka ngcono kuneGPS S9 & apos; s , nangona loo nto isenokungabi nanto yakwenza nokusebenza kweefowuni, kodwa inyani kukuba iflegi entsha ayizisi ziphuculo kumzekelo wangaphambili.
Ukuba awukaze ufunde malunga ne-Samsung kunye neapos kunyaka ophelileyo, ungakhangela ngokupheleleyo Galaxy S8 kwaye S8 + uphononongo lweenkcukacha ezinzulu malunga nokuba zeziphi ezi fowuni zikwinqanaba eliphezulu ezinokukwenza. Ukuba uyayithanda into oyifundayo malunga nabo, i-Best Buy inezinto ezithile ezifanelekileyo kwezi flegi, kodwa baya kuba bephakamile okwexeshana.
I-Galaxy S8 engatshixwanga iyathengiswa nge-150 yeedola kwi-Best Buy, oko kuthetha ukuba wena & apos uza kuhlawula i-450 yeedola endaweni yexabiso elipheleleyo le- $ 600. Kwelinye icala, i-Galaxy S8 enkulu inokubamba nje i-540 yeedola, nangona ixesha elininzi uyakufumana ifumaneka nge $ 690 ngqo.
Zombini iimodeli ezingatshixwanga ziyahambelana ngokupheleleyo nazo zonke izinto eziphambili ezithwala abantu eUnited States, kubandakanya i-AT & T, Sprint, T-Mobile, kunye neVerizon, kodwa baya kusebenza kunye nabaqhubi abancinci benethiwekhi njengeCricket Wireless, iBoost Mobile, iMetroPCS, kunye neTracfone.
umthombo: Okona kuthenga 1 , Mbini )
I-iPhone SE (2020) vs iPhone 8: umahluko
Jonga isizathu sokuba uSihlalo weFCC uPai angaphumeleli kwaye angavumeli iifowuni zezwi kwi-intanethi kwiinqwelomoya
I-rumor ye-Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 ibonakaliswa ngumlinganiso, ii-specs zityhilwe
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S5 yakho yaseYurophu (SM-G900F) kwi-firmware yakutshanje ye-Android 5.0 Lollipop
Isamsung kunye neapos s Galaxy Watch Active 2 inqaku lesaphulelo se-monster ngaphambi kwe-Prime Day 2021
I-T-Mobile vs AT & T kunye neVerizon engenamda ye-5G izicwangciso zokuthelekisa amaxabiso